नराम्रा सपना देख्नुहुन्छ ? यी तरिकाबाट बच्नुहोस् | Namuna Nepal
गृहपृष्ठ नराम्रा सपना देख्नुहुन्छ ? यी तरिकाबाट बच्नुहोस्
एजेन्सी– कहिलेकांही त नराम्रा सपना देखेपछि रातको बीचैमा हाम्रो निद्रा खलबलिन्छ । यसले हामीलाई मानसिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्यमा पनि असर गर्छ । जब हामी सुत्छौँ, हाम्रो शरीरले आफूलाई आवश्यक शक्ति सन्चय गर्न थाल्छ । तर, कहिलेकांही यस्ता सपनाले हामीलाई डिस्टर्ब गरिदिन्छन् । एउटा रिपोर्टका अनुसार नराम्रा सपना आउनुको कारण पछिल्ला केही बिमारीहरु पनि कारण हुनसक्छन् । मस्तिष्कमा भएका रसायनमा आउने गडबढीका कारण त्यस्तो हुनसक्छ । उच्च रक्तचापका कारण पनि हामीले नराम्रा सपना देखेका हुनसक्छौँ । यो सब रोक्नका लागि हामीले निम्न पाँच उपाय अपनाउन सक्छौँ ।
अघिल्लाे - छुँदा ‘काउकुती’ लाग्ने अनौठो रुख भेटियो